स्थानीय सरकारबाट न्याय कहिले ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
स्थानीय सरकारबाट न्याय कहिले ?
जेष्ठ ३१, २०७५ अमृता अनमोल
काठमाडौँ — स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किल्ला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली–बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार यसले पाएको छ । त्यसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । उनीहरूले नागरिकलाई आभास हुनेगरी न्याय कहिले दिने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका छन् । त्यो ३ सदस्यीय छ । समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । सजिलै र छिटै न्याय पाइने आसमा धेरै पीडित प्रहरी र अदालतको सट्टा स्थानीय तहमा आएका छन् । यद्यपि धेरै स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको काम थालेका छैनन् । कतिपयले न्याय सम्पादनका लागि कार्यविधि र कानुन नै बनाएका छैनन् । कानुन बनेका कतिमा भौतिक स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन ।
गाउँपालिका तह धेरैको न्यायिक समिति संयोजक बस्ने कोठासमेत छैन । यस्तोमा न्याय सम्पादनको कल्पना पनि उनीहरूले गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिमै पनि कानुनी अज्ञानताका कारण पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन गरेको छैन । केहीले उजुरी आएका विवाद मिलाउने काम गरेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले मिलाएका तिनै विवाद पनि प्रभावकारी छैनन् । यसले गर्दा पीडितले सहज न्याय पाएका छैनन् । बरु न्यायको पर्खाइमा बसेका थप अन्याय भोगेका छन् ।
स्थानीय तहमा बढी आउने मुद्दा लैंगिक र घरेलु हिंसा हुन् । एउटी महिलालाई घर भित्रकाले गरेको हिंसा बताउन प्रहरी वा अदालत जानुभन्दा स्थानीय तहमै छिटो र सहज हुन्छ । नेपालमा घर भित्रको उजुरी हेर्न पारिवारिक अदालत छैन । यस्तोमा न्याय पाउने सजिलो ठाउँ स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तह घरदेखि नजिक हुन्छ । त्यहाँ चिनेजानेकै व्यक्ति हुन्छन् । यसैले महिलाले सजिलै आउन र गुनासो पोख्न सक्छन् ।
घरेलु हिंसा पीडितले उजुरी दिनसक्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना तल्लो तहमा छैन । अदालत पुगे पनि द्रुत अदालती सेवा र निशुल्क कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीले पनि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्दैन । यस्तो बेलामा पीडितलाई राहत हुनेगरी अहिले न्यायिक समिति गठन भएको छ । यसले तत्काल काम थालेमात्रै धेरैको पीडामा मलम लाग्नेछ । न्याय खोज्न जाँदा हुने असुरक्षाका कारण पनि धेरै घरेलु हिंसा पीडित आफ्ना विरुद्ध लडेर न्याय लिँदैनन् । सट्टामा आफ्नाले दिएका पीडाहरूलाई नियति सम्झेर सहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाको न्यायका लागि पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन थाल्नुपर्छ ।
न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरीहरू प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादहरू प्रहरीले पुन: स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पीडक, पीडित र साक्षी जुटाउन स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ । यो बताउँदै प्रहरीले समेत पीडितलाई न्याय दिने काम न्यायिक समितिको हो भनेर तर्किने गरेको छ । यसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । बरु झन् प्रताडित भएका छन् ।
नियमित न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी र न्यायिक प्रहरीको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । यसले पनि न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन नथालेका हुन् । विवाद सल्ट्याउन कानुन व्यवसायीको राय लिनुपर्ने, संविधान तथा कानुनका ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनी काम–कारबाही गर्न कठिन छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्न कानुनी शिक्षा आवश्यक छ । राज्यले अधिकारमात्रै दिएर हुँदैन, अधिकार उपयोग गर्ने मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन पनि दिनुपर्छ । न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत र सीपको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । स्थान र अनुभव अभावले विवाद सुन्ने र न्याय दिने काममा समस्या हुनदिनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, न्यायिक समितिहरूले तत्काल इजलाश सुरु गर्नुपर्छ । न्यायको पहुँचमा नपुगेका पीडितलाई सहज न्याय दिनुपर्छ । न्याय कहिले पाइएला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५०
रुसको गर्जन, साउदीको आस
कमजोर वरीयताका टोलीबाट विश्वकप सुरुआत
जेष्ठ ३१, २०७५ रोयटर्स
मस्को — चाहेर पनि कसैले प्रतियोगिताको दुई कमजोर टोलीलाई प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा उतार्ने थिएन । तर आयोजक रुस र साउदी अरेबिया बिहीबार मस्कोमा विश्वकै सर्वाधिक रुचाइएको खेलकुद महोत्सवको उद्घाटन खेलमा आमनेसामने हुँदै छन् ।
आयोजक रुस र साउदी अरेबिया प्रतियोगिताका सबैभन्दा तल्लो वरीयताका टोली हुन् । दुवै टोली खराब फर्ममा गुज्रिइरहेका छन् । यद्यपि यिनै दुई टोलीको खेलले फुटबल महाकुम्भ सुरुहुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता नजनाएका कारण रुस फिफा वरीयताको ७० औं स्थानमा पुगेको छ । विश्वकप टोलीका लागि यो निकै कम वरीयता मानिन्छ । यता विश्वकपमा एसियाबाट सिधै छनोट भएको साउदीको पनि वरीयता ६७ औं स्थानमात्र छ ।
रुसले सन् २०१७ अक्टोबरयता खेलेका ७ खेलमा जित दर्ता गर्न सकेको छैन । यसका बाबजुद आयोजक रुस दोस्रो चरणलाई स्थान बनाउने अपेक्षामा छ । यस समूहका अरु टोलीमा इजिप्ट र उरुग्वे छन् ।
रुसका प्रशिक्षक स्टानिस्लाभ चर्चेसोभले टोलीलाई एकीकृत गर्न निकै मिहिनेत गरेका छन् । रक्षात्मक हिसाबमा टोलीलाई चोटले सताए पनि उनले प्रतियोगिताअवधिमा टोलीले अझै सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पछिल्लोपल्ट रुसले दक्षिण कोरियालाई ४–२ ले पराजित गरेको खेलमा दुई आत्मघाती गोलको सहारा लिनुपरेको थियो । गत साता खेलेका वार्मअप खेलमा रुसले अस्ट्रियासँग पराजय बेहोर्‍यो भने टर्कीसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो ।
रुसलाई मैत्रीपूर्ण खेलमा आक्रमण बुन्न कठिन भइरहेको थियो भने दशकअघि युरोपेली च्याम्पियनसिपमा देखिएको स्वर्णिम युगको कुनै छनक नै थिएन । सन् २००८ युरोको सेमिफाइनल पुगेको टोली त्यसअघि र पछिको विश्वकपमा छनोट हुन असफल रहेको थियो । सन् २०१४ को संस्करणमा पनि खराब प्रदर्शन गर्दै टोली समूहमा बेल्जियम र अल्जेरियाभन्दा पछाडि रहयो ।
केही महिनायता खराब लयबाट गुज्रिरहेको रुसले घरेलु मैदानमै खेलिरहे पनि ठूलो आशा राख्ने ठाउँ छैन । यद्यपि खेलाडीलाई समर्थकको साथ र प्रतियोगिताको महत्त्वले केही उर्जा भने थपिन सक्छ । सन् २०१४ मा टोलीबाट हटाइएपछि पुनरागमन गरेका फरवार्ड फ्योडोर स्मोलोभले लगातार गोल गरिरहेकाले टोलीलाई केही राहत मिलेको छ । पछिल्ला तीन सिजनमा घरेलु क्लब क्राजोन्डारका लागि ६० गोल गरिसकेका स्मोलोभलाई सहकर्मी मिडफिल्डरले उचित पास मिलाइदिएको खण्डमा रुसले गोल खोज्न टाढा जानुपर्दैन ।
रुसले विश्वकपमा उत्कृष्ट सुरुआत पाउने हो भने साउदी नै उचित विपक्षी हो । साउदीले पछिल्ला मैत्रीपूर्ण खेलमा इटाली, पेरु र जर्मनीसँग पराजय बेहोरेको छ । साउदीले कुनै समय राम्रो प्रदर्शनको संकेत दिँदै मे महिनामा अल्जेरिया र ग्रिसलाई हराएको पनि थियो ।
घरेलु लिगका खेलाडीले भरिपूर्ण साउदी टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको कमी छ । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई स्पेनमा खेल्न पठाउने प्रयोग पनि सफल हुन नसक्दा टोली थप संकटमा पर्‍यो ।
विश्वकपकै प्रदर्शन हेर्ने हो भने पनि सन् २००६ पछि साउदीको यो पहिलो सहभागिता हो । पछिल्ला तीन सहभागितामा टोलीले ७ हार र २ बराबरी नतिजा प्राप्त गरेको छ ।
रुसले योभन्दा राम्रो मौकाको अपेक्षा गर्न सक्दैनथ्यो । प्रशिक्षक चर्चेसोभ समर्थक र खेलाडीले केही आत्मविश्वास जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘म कसैलाई विश्वास दिलाउन कुनै थेरापिस्ट त होइन । तर हामीले अगाडि बढ्नु छ भने आफैंमा विश्वास राख्नुपर्छ । समर्थकको साथ पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:४६